Shina miloko vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny volony vita amin'ny volon-koditra vita amin'ny volon-koditra sy mpamokatra | Yongsheng
Borosy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehiny vita amin'ny volony vita amin'ny volony
Color: Mainty, Mena.…
Famokarana mialoha ------ santionany ------ fanamafisana-Fividianana fitaovana-Component ------ ampahan'ny tsindrona-kalitaon'ny ------ inspeksi-Component ------ ampahany - ---- ambonin'ny ------ famaranana-Kalitao ------ fanaraha-maso-Assembly-Quality ------ fanaraha-maso-fonosana.
Tanana mahazatra sy noforonina miaraka amin'ny fehikibo vita amin'ny fingotra mora tohina mora foana hitazona azy sy ahazoana aina. Ny borosy volo dia vita tamin'ny fitaovana matte mba hahazoana antoka ny fihazonana mafy.
Ny borosy volo vita amin'ny alika dia mety amin'ny endrika hafa, ny ondana malefaka miaraka amin'ny nylon na ny volom-borona mifangaro dia tsy hikorontana na hisintona volo, mety ho amin'ny fanorana tsara ihany koa. Mampiorina ny fikorianan'ny rà ao amin'ny hodi-doha ny fotony mihombo, mamokatra volo salama kokoa, mamporisika ny fitomboan'ny volo ary mampitombo ny follicle volo amin'ny menaka voajanahary, ary ny lavaka kely misy rivotra kosa dia manala ny tsindry avy amin'ny rivotra mba tsy hanimba ny loha. Hisy lavaka eo amin'ilay ondana. Afaka mamela ny rivotra hivezivezy izy ary afaka miaraka amina fanorana malefaka kokoa.
Ny borosy volo dia azo ampiasaina amin'ny karazana volo rehetra: tsara, matevina na olioly. Ity vokatra ity dia mety amin'ny rehetra ary mahavariana amin'ny volo lena na maina. Ny borosy volo lava habe lehibe dia mifanaraka amin'ny fihodinan'ny loha.
Ny borosy volo boribory dia afaka mamorona onja malefaka na olioly, manampy vatana & fahafenoana na malama sy manitsy volo maditra, olioly na mikofokofoka.
Azonao atao ny misafidy loko misy loko vita amin'ny fingotra, loko iray ho an'ny borosy lavaka na famolavolana loko misaraka ho an'ny loha sy ny tahony. Maimaimpoana ny sary famantarana loko iray. Kitapo mahazatra dia kitapo nylon misokatra. Azontsika atao koa ny manolotra «hanger plastika», «hanger-taratasy», karatra taratasy, kitapo opp, boaty PET ary fampisehoana.
Manaraka: Volom-bolo nify be volo miaraka amin'ny tahony milamina
Borosy volo varahina
Borosy vita amin'ny volo vy
Borosy volo vita amin'ny hazo kely
Borosy vita amin'ny volo vita amin'ny zezika manokana
Borosy volo amin'ny soavaly hazo